Raadin Ka Saarida Saameynta Raadinta Maalgelinta Taageerada Xalinta Khalkhalka
Post post ee soo socota asal ahaan u muuqday at Dib-u-eegista Dib-u-eegista Bulshada ee Stanford. Waxaa halkan la daabacaa ruqsaddiisa dhammaanteed.
Qaab afar-dhibcood oo loogu talagalay maal-galiyeyaasha si loo hormariyo mustaqbalka hoose ee carbon-ka iyadoo la isticmaalayo lacag-bixin dhan.
Fikradaha ayaa abuuraya hogaamiyaasha adduunka ee ka socda shir caalami ah ee cimilada ee Paris si ay wax uga qabato kuleylka caalamiga ah. Tani waxay noqon doontaa shir diineed oo taariikh ah, waxaanan ku faraxsanahay inaan aragno horay u socotay sida qorshaysan, iyada oo mar kale muujinaysa adkeysiga Magaalada City.
Baaxadda dhibaatada cimilada ee wajahaysa dhulkayagu, si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan yihiin hoggaamiyeyaasha heer kasta iyo qayb kasta - ma ahan kuwa kaliya ee ka qaybgalaya shirwaynaha-qaado tallaabo geesinimo leh.
Naxariistayaasha, gaar ahaan, waxay wax ka qabtaan caqabadda iyaga oo abaabulaya dherarkooda siyaabo cusub. Qaybta bulshada ayaa ku fadhiya 1-milyan oo doollar oo ah lacago dheelitir ah, iyada oo kallifaad kastana ay bixiso fursado deg-deg ah oo awood leh si loo hormariyo mustaqbal yar oo kaarboon.
Waxaannu daba galnaa qaar ka mid ah fursaddan cusub ee McKnight Foundation, oo ah aasaas qoys oo gaar ah oo bixiya wax ka badan $ 85 milyan sannadkii gobolka Minnesota ee ku yaalla iyo adduunka oo dhan. Waxaan muddo dheer taageernay deeq bixiyeyaasha ka shaqeynaya dhisidda iyo xoojinta bulshooyinka, dhaqaalaha, iyo deegaan deegaanka ah. Laakiin marka la eego isbeddelka isbeddelka cimilada iyo awoodda ururku si loo yareeyo khayraadkeena dhammaan saameynta bulshada, waxaan go'aansannay inaanu sameyno wax badan.
Qaybta bulshada ayaa ku fadhiya 1-milyan oo doollar oo ah lacago dheelitir ah, iyada oo kallifaad kastana ay bixiso fursado deg-deg ah oo awood leh si loo hormariyo mustaqbal yar oo kaarboon.
Sannadkii 2013, gudigeenu waxay sameyeen dabacsanaan saameynta barnaamijka maalgelinta oo leh $ 200 milyan, ama 10 boqolkiiba oo ah $ 2 bilyan oo dollar ah. Barnaamijkayagu wuxuu isticmaalaa maalgashi toos ah, lacago, iyo deyn si uu u bixiyo dib u dhiska dhaqaale, oo ay weheliso dhaqaalaha deegaanka ama bulshada. Maalgelinta saameynta waa in ay sidoo kale bixisaa dib u noqoshada barashada aasaaska, taas oo shaqaalaha barnaamijka ay ku helaan macluumaad cusub iyo aragtiyaha suuqa. Laakiin markii aan bilaabnay inaan waydiisanno sida aan u xoojin karno 90 boqolkiiba kale, waxaan ogaanay fursado dheeraad ah oo saameyn leh. Waxaan tan iyo waagii hore horumarinnay qaabdhismeedka maalgalinta ee mas'uulka ah kaas oo khuseya dhammaan qaybaha wax-qabadka ee dhamaanteen.
Nidaamkeena waxaa lagu abaabulay afar dhibcood oo miisaaniyad ah: doorka aan ka nahay macaamilka adeegyada maaliyadeed, sida saamile, sida kaqeybgalaha suuqa, iyo hantida hantida. Waxay bixisaa qaab wax qabad ah oo aan kor u qaadi karno ama hoos udhisanayno iyada oo ku xidhan dhaqaalaha iyo kheyraadka aadanaha, waxayna caawin kartaa maal-gashiga saamaynta leh ee dabagalka murqaha oo dhan. Dhab ahaantii, waxaan aaminsanahay in qaabkeenna afar-dhibcood uu gacan ka geysan karo maal-galiye kasta oo dhisaya dhaqaale aad u culus.
Doorashadayadu waxay tahay Macaamilka Adeegyada Maaliyadeed
Macaamiil ahaan alaabada maaliyadeed iyo adeegyadaba, waxaan kor u qaadi karnaa fekerka isdhexgalka oo ah in la iska indha-tiro, walxo kale, tixgelin suuqeed. Guddiga maalgashadeena, taas oo macnaheedu yahay in si ballaaran oo ula kac ah looga fikiro arrimaha deegaanka, bulshada, iyo maamulka shirkadaha (ESG).
Ka hor inta aan la sheegin qaab-dhismeedka afar-dhibcood, waxaynu ka warqabnaa halisaha bulshada iyo deegaanka iyo fursadaha, laakiin aysan jirin nidaamyo rasmi ah oo lagu dhaqmo fahamkaas. Hada, guddiga maalgelinta McKnight waxay weydiinayaan dhammaan maamulayaasha dhaqaalaha ee ku saabsan hannaanka ESG iyo awoodooda. Ficilkan fudud ee su'aalaha keena wuxuu keeney faham qoto dheer oo ku saabsan maamuleyaasheena iyo hababka ESG-ga, isla markiiba waxay isbeddeli karaan. Kulanka sanadlaha ah ee taxaddir la'aanta ah, tusaale ahaan, mid ka mid ah maareeyayaasha dhaqaalaheena qulqulaya ayaan wax ka sheegin ESG. Sannad ka dib, isla maamulaha ayaa raadinaya inuu ka wada xaajoodo istiraatiijiyada ESG ee isbeddelka dhaqaalaha.
Tusaale kale, waxaan samaynay falanqeyn taxane ah horraantii 2014 kaas oo lagu qeexay falanqayntii Russell 3000 tracker sida hannaankayaga ugu badan ee kaarboonka. Gudigeenna maalgashadeen ayaa rabay inaynu maal-galino 70-milyan oo doolar-si aan ugu adeegno halista khatarta ah ee hooseysa, qiimaha jaban ee qaybta kharashka ee marwalba, hadana hoos loo dhigo khatarta cimilada ee McKnight. Waan soo dhawaynay Mellon Capital Management oo ku saabsan yareynta soo-gaadhista soo saarayaasha wax soo saarayaasha aan baaxadaysan iyo ka saarida dhuxusha, iyo jawaabta, Mellon ayaa soo saaray shey cusub oo cusub.
Sannadki sannadkaas, waxaan ku daadinnay Sanduuqa Wax-qabadka Wax-qabadka Carbon $ 100 milyan. Maalgashadeeda hal sano, sanduuqa 1,000 shirkadood ee shirkadda ayaa ka sarreeyaa qiyaasta asaasiga, iyada oo 53% hoos u dhigtay karboonka hooseeya (gaasta aqalka gaaska aqal galka dollarka). Hannaanku wuxuu abuuray awood cusub oo ESG gudaha Mellon wuxuuna billaabay badeecad cusub oo ka dhigaysa daneyn maaliyadeed oo muhiim ah: Guul ku guuleysiga macmiilka iyo maamulaha maaliyadda. Tani waa sida ay maalgashadayaashu u leeyihiin awood ay ku dhisaan suuqyo cusub.
Miisaankeena 900-Milyan oo loogu talagalay miisaaniyadda dadweynaha ayaa ka dhigaya Machadka "McKnight Foundation" saamileyda shirkadaha, awood u leh inay u codeeyaan ururrada shirkadaha iyo inay su'aalo ka qabtaan hawlaha ESG, istaraatiijiyada, iyo maareynta khatarta.
Dhaqan ahaan, waxaanu u codeynaa dhammaan wakiillada xisaabaadka gaarka ah ee la maareynayo, garashada maaddada isbeddelka cimilada. Waxaan sidoo kale raadineynaa inaanu hagaajino waxa aan leenahay.
Tan ugu dambeyntii, Abriil 2015, waxaan u dirnay warqad fudud illaa 170 shirkadood oo warshadaha korantada-gaaska-sare ah oo aan sheegin qiiqa si ay u ogaadaan in Istaraatiijiyadda Waxqabadka Carbon loo isticmaalay isticmaalka qiyaasta-oo aan fiicneyn. Waxaan dib uga maqalnay 10 shirkadood, oo ay ku jiraan mid ka mid ah in la isku raacay in la soo sheego tirooyinka saxda ah. Tallaabo yaryar, laakiin talaabo horey u sii socota.
Kaalinteena Ka Qaybgalayaasha Suuqa
Maalgaliye, waxaan leenahay maqaarka ciyaarta ee leh siyaasadaha sameynta iyo xakameyn dhaqaale, waxaanan ku biiri karnaa maalgashadayaasha kale ee hay'adaha si loo dhiiri geliyo hufnaan dheeraad ah.
Tan iyo markii loo soo bandhigay qaab-dhismeedkeenna afar-dhibcood, waxaanu la shaqeynay daraasiin maal-gashadayaal hay'adeed oo matalaya trillions of dollars iyada oo loo marayo Shabakada Maalgashiga Khatarta Cimilada. Wadajir ahaan, waxaan waydiinay Guddiga Suuqa iyo Iskuduwaha ee Maraykanka in ay u baahdaan warbixinta shirkadaha wanaagsan ee halisaha cimilada. Waxaan sidoo kale ogeysiinay hoggaamiyeyaasha G-7 in maalgashadayaashu ay u baahanyihiin hubin weyn oo ku saabsan qiimaha carbon-ka si ay u sameeyaan go'aano wanaagsan. Waxaan dhiirigelinaynaa maalgashadayaasha kale inay sidan oo kale sameeyaan. Tani waa sida ururrada maalgashadayaasha isku midka ah ay u dhisaan kaabayaasha suuqa.
Kaalkeennu waa Hantida Hantida
Sida naloogu sheegay, waxaan bilownay in aan toos u dirno doolarkeena fursadaha maalgashiga kuwaas oo si taxadar leh ula shaqeynaya howlahayaga. Qeyb ka mid ah McKnight $ 200 million saamaynta saameynta ayaa leh sicirrada sicirka suuqa; $ 50 milyan ayaa leh dulqaad balaaran oo halis ah iyada oo leh boqolkiiba lix qaab hor leh; iyo $ 50 malyan waxay ku jirtaa maalgalin dhaqaale oo la xidhiidha barnaamijka hooseeya. Illaa iyo hadda waxaan $ 45 milyan ku bixinay wixii ka sarreeya wixii ka dambeeya $ 105 milyan oo ka mid ah Istaraatiijiyadda waxqabadka Carbon.
Isticmaalka maalgashiga si loo kobciyo dhaqaalaha tamarta nadiifka ah wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad iyo ilo Anaga, taas oo macnaheedu yahay in la kiraysto agaasime saameyn ku leh maalgashiga iyo la taliye khaas ah, Gudoomiyaha, si loo dhiso barnaamijka. Dhammaan kiisaska aan aqbalayno inaan ka yareyno aasaaska aasaasiga ah ee la doonayo, waxaan raadineynaa maalgashiyo maskax leh oo leh saameeyn bulsho iyo deegaaneed oo sarreeya, istraatijiyadeed oo ka soo baxday Wasaaradda Hantidhowrka Wasaarada Maaliyada dhawaan. Xaaladaha oo dhan, maalgashadeena saameynta waa in ay sidoo kale soo celiyaan barashada askarta barnaamijkeena.
Waqtiga kaliya ayaa sheegi doona haddii aan ku guuleysaneyno dhaqaalaha iyo dib u noqoshada bulshada aan raadsanno. The barashada Si kastaba ha noqotee, soo noqoshada, si dhakhso ah ayay u dhacday Ka dib 18 bilood ka dib, waxaan arkeynay awoodda iyo ujeedada ah inay soo jiidato adeegyadan suuqa. Si loo dedejiyo horumarka ku saabsan xalka cimilada, maal-galiyeyaasha intooda badan waa in ay aqoonsadaan oo lumiyaan awoodda ay horay u haystaan.
Iftiiminta Barnaamijka Soo-kabashada Raasamaalka Isku-dhafan
By Eric Muschler Nofeembar 2020